आज असार १५ – धान दिबस ! हिलो खेलेर रमाइलो गर्दै यसरि मनाउदै ( भिडियो) - Online sakharapur
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/आज असार १५ – धान दिबस ! हिलो खेलेर रमाइलो गर्दै यसरि मनाउदै ( भिडियो)
आज असार १५ – धान दिबस ! हिलो खेलेर रमाइलो गर्दै यसरि मनाउदै ( भिडियो)
आजको दिन दही च्यूरा खाएर मनाउने गरिन्छ । असार १५ लाई नेपाली समाजमा दही च्यूरा खाने पर्वका रुपमा पनि लिइन्छ । खेतीपातीबाहेक अन्य पेशा र व्यवसायमा लागेका नेपालीले पनि आज दही च्यूरा खाई असार १५ मनाउँछन् । हाम्रो संस्कृतिमा दहीको स्थान महत्वपूर्ण छ । शुभकार्यका लागि घर बाहिर निस्कने, विदेश जाने आदि महत्वपूर्ण काम गर्नुअघि दही अक्षता मुछेर निधारमा रातो टीका लगाउने परम्परा छ ।यस्ता शुभकाममा निस्कनुअघि सगुनका रुपमा पनि दही खुवाएर बिदाइ गरिन्छ । दही खुवाएर बिदा गरे शुभ प्राप्त हुने सांस्कृतिक मान्यता छ । यसरी धान रोपाइँ गरे खेतबाट सह बसी मनग्य उत्पादन हुने विश्वास रहेको छ ।
सेक्स गर्दा पुरुषले के के गरेको मनपर्छ भन्ने प्रश्नमा केटीहरुको जवाफ……..हेर्नुहोस भिडियो !!
९०० बर्षदेखी पहाडमा अडिएको एक मुस्लिम बस्ति,